Yope December 20, 2016
မင်္ဂလာပါ YOPE သူငယ်ချင်းတို့ရေ.. ဒီအချိန်က ရာသီဥတု သာယာတယ် ရုံးပိတ်ရက်တွေလဲများတာမို့ ခရီးသွားမယ်ဆို အရမ်းကောင်းတဲ့ အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်. ဒါကြောင့် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူသွားဖို့ တိုင်ပင်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ.. Crazy Stuff က ကိုနေပိုင်ကလည်းသူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ခရီးသွားဖို့တိုင်ပင်နေပါတယ်.. ဒီတော့ သူသွားဖြစ်မလား မသွားဖြစ်မလားဆိုတာကိုတော့ video လေးမှာကြည့်ပြီး အားပေးပါဦးနော် သူငယ်ချင်းတို့လည်း ..ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စရာခရီးတွေ သွားနိုင်ပါစေ..
Yope January 10, 2017
မင်္ဂလာပါ YOPE သူငယ်ချင်းတို့ရေ. သူငယ်ချင်းတို့အတွက် Crazy Stuff ကနေ ထူးထူးခြားခြား တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်.. ဒီတစ်ပတ်အတွက် title ကတော့ Cucumber လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်.. ဘာလို့လဲဆိုတာကိုတော့ ကိုယ်တိုင်ဝင်ကြည့်ပြီးအားပေးသွားပါဦး.. Crazy Stuff ဆိုတာ လူငယ်တွေအတွက်ရယ်မောစရာ အဖြစ်အပျက်တွေကို တင်ဆက်ပေးနေတာဘဲဖြစ်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ YOPE သူငယ်ချင်းတို့ရေ သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက ဘယ်လိုပုံစံတွေလဲ? ဒီ video လေးကြည့်ပြီး ကိုယ့်သူငယ်ချင်းပုံစံလေးတွေကို အခြားသူငယ်ချင်းတွေအတွက် ပြောပြခဲ့ပေးပါဦး..
Yope January 12, 2017
မင်္ဂလာပါ YOPE သူငယ်ချင်းတို့ရေ.. ဒီနေ့မှာတော့ Crazy Stuff အစီအစဉ်ကနေ သူငယ်ချင်းတို့ ဒီ video လေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်. Crazy Stuff ဆိုတဲ့အတိုင်း ဘယ်လိုအလွဲတွေ ကြည့်မလဲဆိုတာကို video လေးမှာကြည့်ပြီး အားပေးပါဦးနော်. www.yope.com.mm